खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…
Video रोचक समाज
March 25, 2022 March 25, 2022 AdminLeaveaComment on खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…
मैले पहाडबाट सुन्तला जुनारसहितका सिजनको फलफूल लिएर गएको थिएँ । कबिता खोइ भाउजू भन्दै म उसको घर पुगें ।”ओहो समीर बाबु पो” भन्दै घिमिरिने भाउजू निस्किइन । मैलै आफूले ल्याई दिएका फलफूल थमाएँ ।
घिमिरिनी भाउजू त्यतिखेर पातलो गा उनमा थिइन । उनका छा तीमा थि पहिलो पटक नजर पुग्यो । “ओहो कति ठू “ला दू” ध” अनायस मेरो मुखबाट निस्क्यो । “क्या हो समिर बाबु त जागिरे भएपछि जे पा यो त्यही बो “ल्न था” ल्नु भएछ” कोपिला नाम गरेकी भा उजू अ नमस्क हुदै जवाफ फर्काइन ।
ओ हो मैलै त बो “ल्न न” हुने कुरा बोले छु भन्दै म ला “ज र ग्ला” नीले भुतुक्क भएँ र फर्कन थाले । “समिर बाबु कहाँ हिड्नु भएको म चिया बनाएर ल्याउँछु” भन्दै कोपिला भाउजू भित्र भान्सातिर लागिन । म भने उनीहरुको ड्रइङ रुममै बसेरपर्खन थालें ।
तनहुँतिर कुनै गाउँमा घर भएका विनोद दाई अन्तःशुल्क कार्यालयमा सुब्बा थिए । अन्तः शुल्कका सुब्बा मात्र भए पनि उनको काठमाडौंमा महल भन्न सुहाउने भब्य घर थियो बैंकहरुमा लाखौंको ब्यालेन्स थियो ।
ठूल्ठूला व्यापारीहरुसँगमात्र उनको संगत थियो त्यसैले उनको घरमा थोरै मात्र बास हुन्थ्यो । बिनोद दाई बाहिर खुब के “टी घु” माउँ छन अरे भन्ने मैले धेरै अगाडि देखि सुनेको थिएँ । हेर घरैमा यति राम्री स्वा “स्नी हुँ” दाहुँदै बिनोद दाई बाहिर के बरालिएका होलान म सोच्न थालें ।
त्यतिखेरसम्म कोपिला भाउजूले चिया बनाएर ल्याइसकेकी थिइन । “अनि समिर बाबु जागिरको अनुभव कस्तो रह्यो त” चियाको एउटा कप मलाई थमाउँदै अर्को कप आफैले लिएर सोफामा मेरो छेउमा बस्दै कोपिला भाउजूले भनिन ।
“आ भाउजू सारै दुःख पहाडको ठाउँ धेरै हिड्नु पर्ने । मामाको करले जागिर खाई हालियो । म त अब जान्न” मैले दुःख दर्साउँदै भने ।”आम्मुई त्यस्तो के भन्नु भएको बाबुले पाएको जागिर पनि कहीँ छोड्नु हुन्छ” उनले भनिन । “अब त जागिर खाएर घरबार गर्नुपर्छ ।”
“भाउजू के अहिलेनै बिबाह गर्नु” मैले भने । “अर्का “की स्वा” स्नीको दू “ध-हे” रेर मुख मिठ्याउनुभन्दा त आ “फ्नै ल्या” ए राम्रो नि” उनले छिल्लदै भनिन । जिल्लामा आ इमाइको श “रिर” को स्वा “द लि” इसकेको मलाई यो कुराले हौस्यायो ।
“के गर्ने मु “ख मि” ठ्याउ ने मात्रै त हो नि” मैलै प्रसंग जोडें । त्यतिखेरसम्म उनले आफ्नो गा उनको खि “प खो” लिसकेकी रहिछिन । मस्तका दू “धका पो” काका बी च बनेको आकर्षक खाल्डो प्रस्ट देखियो । “लो “ग्ने क” हिले घर बस्ने होइन ।
दुई जना आमा छोरीमात्र भएको ठाउँमा ‘ हेर्नु बाबु बो “क्सी ला” गेर बसिखान दिएका छैनन”उनले प्रसंग मोड्न खोजेजस्तो मलाई लाग्यो । टोलमा इमान्दार केटाका रुपमा चिनिएको मैले अलि सहज अनुभव गरे र भने “हे भाउजू तपाईजस्तो पढे लेखेको मान्छे पनि
बो-क्सी -को कुरामा विश्वास गर्ने ।” “नपत्याउनु भएको ल हेर्नुस” मेरो नजिकै आएर आफ्नो गा उन उचा “लेर” से “ता ति” – घ्रा मतिर फर्का एर अलि कति नि “लो भ” एको ठाउँतिर दे खा उँ दै उनले भनिन ।
अघि बटम खुलेको छा “ती दे” खेरै औडा हा भएको मेरो म “न झ” न उनले आफ्नो का “पै न” जिक पुर्याएर गा उन फ र्काएप छि अधै र्य हुन थाल्यो । उ “त्तेज” नाले मेरो स्वा-स फु-ल्न थाल्यो ।
त्यही पनि सं यमि त भएर मैले भने “के को बो “क्सीले खा” एको हुन्थ्यो नशा चेपिएर र “गत ज” मेर यस्तो भएको नि” मेरो जवाफ फर्कन नपाउदै उनले एकै पटक मप्रति आक्रो सित हुँ “दै भ” निन “आइमाइको कुरा पनि नबुझने, कस्तो मान्छे हौ समिर ।
साउदी अरबमा मृत्यु भएका ३० नेपाली.. देखेर पनि नदेखे जस्तो नगर्नुहोस RIP लेखी सेयर गरौं
बच्चा नहुने महिलालाई ‘बच्चा’ हुने बनाइदिने भन्दै बाबा आफैं जुटेपछि….
चीनले उठायो कडा कदम ! ताइवानलाई युक्रेनसँग तुलना गरेपछि भड्कियो चीन
छोराछोरीलाई कार बाहिर राखेर परपुरूषसँग कारभित्र ‘मस्ती’ गरेपछि… [भिडियो सहित]
पल शाह छुटेनन् NGO ले खेल्यो यस्तो सडेन्त्र बिन्यको जोडीको गरे अपराधीलाई नछोड्ने चेतावनी